Tilmaan ku saabsan qoraalka saxda ah ee ka kooban waxyaabaha la yiraahdo World March
Bogga ugu weyn » Tilmaan ku saabsan qoraalka saxda ah ee ka kooban waxyaabaha la yiraahdo World March
1 Tilmaanta Macluumaadka Warfaafinta, Wararka, War-Saxaafadeed
1.1 Foomka qoraalka
1.2 Ereyga muhiimka ah ee qorista qoraalka
1.2.1 Sidee loo ogaadaa haddii erayga muhiimka ah uu badanaaba raadiyo?
1.3 Magacyada iyo Magacyada
1.4 Xiriirada bogagga kale
1.7 Qoraalada ugu dambeysa
Tilmaanta Macluumaadka Warfaafinta, Wararka, War-Saxaafadeed
Qoraalka waa inuu lahaadaa qaabka ugu yar ee suurtagalka ah, taas oo ah, tani waa inay ahaataa midda ugu fudud ee heerka naqshadaha. Taasi waa, ha isticmaalin qiyaasaha qoraalka kala duwan. Isticmaal kaliya cabbirka qoraalka caadiga ah.
Waxka saxda ah waa in qoraalka kaliya dhajiyo:
Qabow: si loo muujiyo qodobbada muhiimka ah
Cursive: ugu yaraan lagama maarmaanka u yahay, balamada ama erayada luuqad kale.
Liiska: waa la tirin karaa ama lama tirtiri karo. Liisaska fudud, oo leh dhibco ama nambar ka socda 1 oo ka sii socda.
Si looga fogaado: hoosta ka xariiqa, midabada qoraalka, iwm ...
Haddii qoraalka lagu qoray ereyga ama Google Docs, waa lagama maarmaan in loo badalo qaabka HTML kahor intaan u gudbin websaydhka. Tani waa inaad u isticmaashaa qalab sidan oo kale ah: https://word2cleanhtml.com. Waxay ku dhejisaa qoraalka oo dhan Word ama Google Docs, waxayna ku noqotaa qoraalka HTML. Kadibna qoraalka HTML waxaa lagu dhajiyey tiirarka WordPress ee HTML-ga:
Ereyga muhiimka ah ee qorista qoraalka
Tani waa suurtogalnimada ugu adag ee hagaha qoraalka qoraalkaTaasi waa sababta aan u soo jeedinayo wax sida ugu macquulsan uguna macquulsan uguna macquulsan. Ereyga furaha waa gogoldhig u dhexeeya 2 iyo 5 ereyo oo aad u cajiib badan oo ku soo noqnoqda qodobka. Tusaale ahaan: haddii maqaalku ka hadlayo “a”silsiladda aadanaha ee La Coruña"Markaas Xeerkan 5 wuxuu noqon karaa mid si buuxda u noqon kara musharax loogu magacaabo qodobka muhiimka ah ee maqaalka. Dhab ahaantii si fudud "silsiladda aadanaha" ayaa ku filan tusaalekan. Guud ahaan, ugufiican ayaa ah erayga muhiimka ah inuu noqdo wax ay dadku inta badan ka raadiyaan Google.
Sidee loo ogaadaa haddii erayga muhiimka ah uu badanaaba raadiyo?
Isticmaal qalabka Word Tracker: https://www.wordtracker.com/search (waa in lagu dhejiyaa Territory, Spain) Marka la helo natiijooyin, taasi waa 10 baaritaan, waa ku filan. Ha u adeegsan erey aad u yar, tusaale ahaan: "nabad". Haddii aadan sii isticmaali karin Wordtracker sababta oo ah waxaad dhaaftay xadka raadinta, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa Ubersuggest.
Sida ugu habboon, waa inay lahaadaan natiijooyin, laakiin natiijooyin xumo, inta u dhaxaysa 10 iyo 500 ayaa ku habboon. Tusaale ahaan: "Socdaalka adduunka" waa mid kufiican, oo aan aad u fiicneyn maxaa yeelay wuxuu leeyahay 10 kaliya, laakiin waa mid ku filan:
Dhanka kale, "nabad", "jacayl", ... waa kuwo aad u xun maxaa yeelay waxay leeyihiin tiro aad u sarreysa, si ka sarreeya 500:
Waxaan ogsoonahay in mararka qaarkood ay adagtahay in la helo eray ku habboon shuruudahan. Haddii aadan helin mid ku habboon, waxba ma dhicin.
Hadafku waa in la dhigo ereygan muhiimka ah ugu yaraan wakhtiyada 2 ee qoraalka iyada oo aan la tirin cinwaannada, ama qodobo kale oo aan ka faaleyn doono hoos. Mid ka mid ah soo noqnoqda ereygan muhiimka ah, waa inuu ahaadaa geesinimo.
Magacyada iyo Magacyada
Magaca ugu muhiimsan (midka ka muuqda sanduuqa kore) waa inuu leeyahay inta u dhaxaysa 50 iyo 75. Waa inaad ku dartaa ereyga muhiimka ah. Taasi waa sababta ay caadi ahaan u tahay fikrad wanaagsan in la doorto erayga muhiimka ah, ee eegaya cinwaanka
Waa lagama maarmaan in qoraalka uu leeyahay dhowr magac, ugu yaraan hal magac oo 2 ah (2 Title ee Word). Sida ugu fiican, waa inaad haysataa 1 ama dhowr heer 2 iyo kuwa haysta heerka 3.
Sidoo kale Waxaa lagu talinayaa geli Subtitle qaybta hoose ee Cinwaanka ugu weyn ee oranaysa "Ku qor hoosaad halkan".
Cabbirka subtitle wuxuu noqon karaa mid ballaaran, runtii waxa uu leeyahay jilayaasha 121 iyo 156, maxaa yeelay waxay isticmaali doontaa sharaxaadda Meta. Sidoo kale, waa inay sidoo kale ku jiraan qodobka muhiimka ah.
Ugu dambeyntiina, waa in lagu xisaabtamo in qofka haysta 3 (H3) uu haysto H2 kor ku xusan waana inuu jiraa ugu yaraan 1 haysta H2 si uu marwalba u siiyo darajooyinkaas. H2> H3> H4.
Sidaa darteed, haddii aan eegno amarka cidda heysata haddii tusaale ahaan aan heysano seddexda amar
H2 - H3 - H4 - H2 - H4: Way qaldanaan laheyd maxaa yeelay H4 had iyo jeer waa inuu ka horeeyaa H3
H3 - H2: Way khaldami lahayd, maxaa yeelay H3 had iyo jeer waa inay ka hormartaa H2
H3 - H3 - H3: Way xumaan lahayd maxaa yeelay waa inay noqotaa ugu yaraan hal H2
H2 - H3 - H4 - H4 - H2 - H3 - H2 - H3. Way fiicnaan laheyd maxaa yeelay amarka hannaan-hoosaadka ayaa la ixtiraamaa.
Ugu dambeyn, qodobka muhiimka ah waa inuu tagaa, ee 1 ee koobabka mawduuca (ma aha wax ku xiran haddii ay ku jirto 2 ama Title 3).
Xiriirada bogagga kale
Isku day inaadan isticmaalin xiriirka xariirka, marka laga reebo 2 qoraal ahaan máximo, inkasta oo ay ka fiican tahay 1.
Haddii aysan aheyn xiriir dibedda ah oo leh bog oo leh sumcad badan ** , Nooca Wikipedia, wargeys awood leh ama wax sidan oo kale ah, ku rid link sida NOFOLLOW fursadaha:
Waa muhiim in qodob kasta oo ka mid ah xariirka qaar ka mid ah qodobbada kale ee webka. Haddii aysan dhicin halkaa, waxaad had iyo jeer isku dayi kartaa inaad ku xirto bogga weyn.
Tusaale ahaan: “Dambe World March, waxaan awoodnay inaan ka qeyb galno… ”
Xidhiidhka gudaha, ha ku dhejin NOFOLLOW.
** Haddii aadan aqoon haddii aad leedahay sumcad badan ama aanad galin https://www.alexa.com/siteinfo oo geli URL-ka qaybta, tusaale ahaan "maanta.es".
Haddii aad tahay ka hooseeya 100.000 ee Global Rank, ka dibna uma baahnid inaad qorto NOFOLLOW. Laakiin haddii ay tahay kor, haa waxaad u baahan tahay inaad dhigto.
Ka hor inta aan la sawirin sawir si fudud maskaxda ku hayso waxyaabahan:
Magaca sawirku waa inuu ahaadaa mid fudud, oo aan lahayn “ñ” (beddel ñ for n), oo aan lahjadaha, iyo haddii ay jiraan boosas, ku beddelo hyphens.
Markaad geliso sawirka, waa inaad buuxisid Title, Qoraalka Kale ee Qoraalka iyo Tarjamada. Waxaad isku mid noqon kartaa saddexda qaybood.
Muuqaal sawir leh waa inuusan ka dheereynin 1000 px width.
Sidoo kale Waa lagama maarmaan in la dhimo sawir muuqaal ah. Haddii aad sawir ku dhigtid qoraalka, ha isticmaalin sawir la mid ah Sawir Sawireed. Waxaa macquul ah in aysan jirin muuqaal ku jira qoraalka, in aysan jirin image muuqaal ah. In Title, Text Alternative iyo Description of Image View, waa lagama maarmaan in la dhigo erayga muhiimka ah.
Cabbirka ugu fiican ee muuqaalka sawirku waa 960 x 540 ama saamiga qaabka 16: 9. Baaxadda sawirka waa inuu u dhexeeyaa 600px iyo 1200px width.
Isticmaal shaxdan gaaban:
[su_youtube_advanced url = "https://www.youtube.com/watch?v=MDvXQJgODmA" modestbranding = "haa" https = "haa"]
Si fudud u bedel URL, adoo midka ku haboon.
Qoraalada ugu dambeysa
Sida xaqiiqo xiiso leh, maqaalkani wuxuu buuxinayaa dhammaan shuruudaha qoraalka waxyaabaha aan ka faalooday halkan oo ay ku jiraan shuruudaha baaritaanka:
Halkan waxaan diyaariyey liiska taxanaha PDF ah iyada oo dhinacyada ugu muhiimsan ee aan iloobin.